Filmaata Biyyoolessaa Itophiyaarratti Ibsa ABO – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsFilmaata Biyyoolessaa Itophiyaarratti Ibsa ABO
Akkuma yaadatamu ABO qabsoo hidhannoo waggoota dheeraaf mootummoota Itophiyaa waliin gochaa ture hagayya 2018 keessa dhaabee gaaffii Oromoo gulantaa haarawaatti jijjiire. Kunis gaaffii Oromoo gulantaa haarawaatti jijjiiruudhan qabsoo karaa Nagaa fi Maree siyaasaa tiin mirga dimokraasii fi hiree murteeffannaa kabachiisuuf yaadameetu ture. Akkuma Kanaan Hoogganni ABOs Baatii Fulbaana 2018 keessaa magaalaa Finfinnee, Itophiyaatti deebi’uun ni beekama.
Yeroo sanatti sabni keenya Cehumsa Ebla (April) 2018 irraa eegalee waggaa lamaaf jedhamee itti seename Filmaatni walabaa fi haqaa seenaa biyyattii keessatti yeroo jalqabaaf geggeeffama jedhee yaadamee ture. Garuu abdiin kuni dimismisee dhumarratti dukkanaawuuf yeroo dheeraa itti hin fudhanne. Paartii biyya bitaa ture akkuma injifannoo rakasha mormitoota siyaasaa biyyatti galcheera jedhee argateen utuu yeroo itti hin kenniin ABO irratti olola hamaa jalqbe. Ololli Karaa Sabaa himaa (Social media) fi midiyaa mootummaa akkuma hoogganni dhaabaa Fulbaana 15, 2018 biyyatti seeneen guyyaa muraasa keessatti eegale.
Mootummaan uummata hiree murteeffannaa fi ofiin of-bulchuu lammileen Oromiyaa fi kibba Itophiyaa gaafachaa jiran irratti gochaa suukanneessaa kana raawwachaa utuu jiruu, itti dabalee garaagarummaa ilaalcha polotikaa marii fi falmii siyaasaatiin furuu irra lola Oromiyaa keessatti eegale sana gara biyya Tigray tti ceesisee lola bal’aa labse. Akkuma ummatni beekuu fi seenaa keessatti galmaawee jiru ABOn firummaa TPLF gonkayyuu hin qabu. ABOn dura bu’aa jaarmotaa siyaasaa ta’ee waayiloota isaa waliin mootummaa TPLF tiin hogganamu darbeemmoo EPRDF jedhee uf yaame mormaa ture.
Garuu, dhugaa jiru yoo ilaalle, lolli Tigray keessaatti geggeefamaa jiru itti fufinsa lola Oromiyaa jilbeenfachiisuuf geggeffamaa jiru ta’uu isaa hubanna. Erga kufaatiin diploomaasii qaama biyya bitaa jirurra gahee, fi mootummaan US rakkina hidhaa laga Abbayyaa (GERD) furuuf akka gidduu galu waliigalamee booda Itiyoophiyaan hariiroo Sudan waliin qabdu cabee yeroo ammaa lola guutuu biyya ollaa biraa waliin jalqabuuf qarqara gahamee jira.
Egaa waliigalaatti haala akkasii kana keessatti biyyattiin kan filmaata biyyoolessaaf ‘qophaawaa’ jirtu. Boordii filannoo biyyoolessaa Itopphiyaa fi qaamota kana keessaa qooda qabna jedhan (stakeholders) kan yaadachiisuu feenu, filannoo jechuun waayee guyyaa filatnoo dhaqanii sagalee keennii qofa miti. Filannoo keessatti hedduun barbaachisaan tartiiba filannoon suni ittiin qophaayee fi akkaataa filannoo sana bira gahamee qulqulleessuu dha. Haqaa fi amanamummaan filannoo fi sirni dimokraasii guyyaa filannoo dura sirna filannoo itti geggeffamuu fi hojii sadarkaa adda addaatti raawwatamuu qabuu fi loogii malee qooda fudhannaa jaarmayaa mormitootaa irratti hundaawa.
Filannoo tokko kan ittiin madaalamu adeemsa sirna filannoo sana keessatti jalqabaa hanga dhumaatti raawwatamee malee guyyaa filannoo sagalee dhoksaan kennameen akka hin taane hubatamaa dha. Filannoon haqaa fi dhugaa irratti hundaawe kan gamaagamamu adeemsa filannoo sana keessatti ta’e, kabajamuu mirga mormitootaa fi haqni jiraachuu, loogiin dhabamuu fi kanaafis qaama bilisa ta’een tartiiba raawwatame hordofamuu isaarratti hundaawa. Adeemsi kunis mormitoota hundaaf dirree siyaasaa banuu fi akka bilisaan socho’an eyyamuu; Miidiyaa bilisa ta’ee hunda walqixxummaan tajaajiluu; fi boordii filannoo fi qaama seeraa Bilisa ta’ee loogii tokko malee hojjetu feesisa.
Kanaaf, ABOn filmaata dhufu kana qooda fudhachuu irraa Mootummaan dirree siyaasaa itti dhiphiisuun ugguramuu irraan kan kahe gochaa Mootummaa irraa akka hin hirmaanne taasifamuu isaa labsina.